Gudoomiye Muudeey oo eedeeyn kulul dusha kaga tuuray Jawaari. – Hornafrik Media Network
Gudoomiye Muudeey oo eedeeyn kulul dusha kaga tuuray Jawaari.
Hornafrik-Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Soomaaliya Cabduweli Ibraahim Muudeey oo shir jaraa’id ku qabtay M/Muqdisho ayaa ka hadlay Shaqaaqadii Maanta ka dhacday Xarunta Golaha Shacabka ee sababtay in uu kulanka baaqdo.
Taliyaha Amisom oo sheegay in ay ka masuul yihiin Amniga Jawaari lana wareegi doonaan xarunta Golaha.
Taliyaha Ciidanka Xooga oo sheegay in ay soo xireen ciidanki galay Xarunta Golaha shacabka.